6 Faa'iidooyinka Twitter ee Dhiirrigelinta Noocaaga | Martech Zone
6 Faa'iidooyinka Twitter ee Dhiirrigelinta Noocaaga
Khamiis, Maarso 31, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaa jira in badan oo ka mid ah baraha bulshada iyo khubarada teknolojiyadda halkaas oo ka hadlaya dhimashadii Twitter. Daacad baan u noqon doonaa, in kasta oo buuq ganacsi jiro, haddana waxaan qiimo aan caadi ahayn ka helayaa barxadda. Haddii qof ka socda Twitter uu akhrinayo tan, waa kuwan waxa aan isla markiiba sameyn lahaa si aan u hagaajiyo natiijooyinka ganacsiga:
U oggolow dadka isticmaala inay bixiyaan tweets otomaatig ah. Oh - Waan maqli karaa qaylada hadda, laakiin haddii ay macquul tahay, waxaan bixin lahaa si aan ugu dhiirrigeliyo nuxurkeyga qalab otomaatig ah Waana ku faraxsanaan lahaa in spamers-ku ay isla markiiba ka tagaan madasha. Farriinta otomaatigga ah ee Twitter-ka ayaa ku badan maxaa yeelay waa bilaash… sabab kale ma jirto.
Kordhi diiradda tayada iyo ku xirnaanshaha koritaanka. Uma joogo Twitter inaan raaco dad caan ah… Waxaan halkaan u joogaa inaan dhiirrigeliyo, ku xirnaado oo aan la xiriiro dadka aan daryeelo. Waa tan qoraal kooban oo soo koobaya dareenkayga:
Aaway badhanka "Jooji inaad soo jeediso waxaan raacayaa Kardashian" badhanka @twitter? Og @ Taageero
- Douglas Karr (@nacaybtire) March 28, 2016
Halkaas ayaad tegaysaa… Waxaan aaminsanahay in labadaas isbeddel ay beddeli doonaan natiijooyinka ganacsi ee la xidhiidha Twitter. Hubaal, ma awoodi doonaan inay ku faanaan dad badan oo adeegsada marka loo eego [geli shabakadda bulshada halkan], laakiin waxay dib u soo celin doontaa jacaylka iyo qadarinta loo hayo isgaadhsiinta kooban ee beddelay internetka.
36% suuqleyda waxay macaamiil ku heleen Twitter
Marka sidee summad u isticmaashaa Twitter wax ku ool ah? Follow.com waxay kuu soosaartay macluumaadkan si aad ugu kaxeyso kaqeybgal ballaaran isla markaana aad uga faa'iideysato kobcinta natiijooyinka ganacsi ee kordhay adoo adeegsanaya lixdaas xeeladood:
Ha ka baqin inaad kor u qaad magacaaga on Twitter sida akoon u gaar ah! Calaamaduhu waxay leeyihiin wax ka badan dadka celcelis ahaan.
Ka faa'iidayso Xayeysiinta Twitter! Xitaa waad soo xareyn kartaa macaamiishaada ama liiska macmiilka waxaadna dhisi kartaa qeybaha dhagaystayaasha si aad ugu bartilmaameedsato xayeysiintaada macaamiisha jira ama dadka u eg iyaga oo kale.
Twitter waa socodka madal, adiga oo ku siinaya fursad qaas ah oo aad kula xidhiidhi karto kuwa raacsan ee aan doonaynin inay akhriyaan buug, waxay kaliya rabaan xigasho deg deg ah, kaftan, ama qayb talo ah.
Had iyo jeer ku dar a wicitaan-ku-dhaqaaq, hadday tahay dib u dirid, soo degso, wac, diiwaangelin, ama amar kale.
Ku cusbooneysii cusbooneysiintaada xiriiriyeyaasha iyo sawirrada hawlgal qoto dheer iyo wadaagid!
hashtag Tweets-kaaga si markaa lagugu ogaado raadinta. Hubso inaad daabacdo Tweets-kaaga marka kuwa raacsan ay aad ugu habboon yihiin inay dhageystaan ​​(sida maalmaha fasaxa ah!). Waxaan ku celcelinaa Tweets-keena markasta sidoo kale.
Waa tan Macluumaadka, Xaashida Khiyaamada Awoodda Isticmaalaha Twitter-ka.
Tags: dallacsiinta sumaddaxaashida saxda ahliiska hubihorumarintaretweetTwitterhawlgelinta twitterSuuqgeynta Twitter
DialogTech: Wac Iskudarka iyo Falanqaynta Beddelka
10ka Ujeedo ee Xayeysiinta Facebook
Apr 17, 2017 at 7: 52 AM
twitter wuxuu noqdaa mid waxtar badan leh haddii si sax ah loo isticmaalo.
Waxaan dareemay in adeegsadeheyga isticmaaley uu sii kordhey tiro ahaan
Mawduucaygu wuxuu ahaa mid khuseeya oo macluumaad badan u leh isticmaalaha.
mahadsanid aad u badan soo dhajinta macluumaadkan boostadani waxay ka caawisay sidoo kale inaan hagaajiyo habka aan uga shaqeeyo twitter-ka oo aan u adeegsado si ka sii ballaadhan.